अपराध | Ratopati
चिनीभित्र लुकाएर पेस्तोलको कारोबार access_timeसाउन २६, २०७७
जनकपुर । जनकपुरमा चिनीभित्र लुकाएर पेस्तोल ओसारपसारमा संलग्न एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले जनकपुरको बाह«विघाबाट चिनीको झोलाभित्र पेस्तोल बोक्ने मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का २१ वर्षीय सुजित यादवलाई पक्राउ गरेको हो । धन...
गोंगबु विभत्स हत्याकाण्ड : घटना भएको घर फेला परेसँगै प्रहरीले गर्‍यो सिल (तस्बिरसहित) access_timeसाउन २६, २०७७
काठमाडौं । राजधानीको गोंगबु–गणेशस्थानमा दाङका कृष्णबहादुर बोहराको विभत्स हत्या भएको घटनाको अनुसन्धानमा जुटेको प्रहरीले घटना भएको घर फेला पारेको छ । घटनास्थल मृतकको सुटकेशमा शव भेटिएको स्थानभन्दा ५० मिटरको दूरीमा रहेको छ । घटनास्थल नजिकैको ४ तले घरको एउटा क...
गोंगबुमा सुटकेशमा भेटिएको शवको पहिचान खुल्यो access_timeसाउन २६, २०७७
काठमाडौं । काठमाडौंको टोखा नगरपालिका–१० स्थित गोंगबु गणेशस्थानमा सुटकेशमा फेला परेको शवको सनाखत भएको छ । सुटकेशमा भेटिएको शव दाङका कृष्णबहादुर बोहराको भएको महानगरीय प्रहरी कार्यालयका डिआइजी विश्वराज पोखरेलले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । मृतक काठमा...
सिरहामा ब्राउन सुगरसहित ६ युवक पक्राउ access_timeसाउन २६, २०७७
सिरहा । सिरहा प्रहरीले लागुपदार्थ ब्राउन सुगरसहित ६ जना युवालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । प्रहरीले गोलबजार नपा ६ ढोहटियाका २८ वर्षीय पाण्डव गुप्ताले आफ्नै घरमा बिक्रीको लागि लुकाई राखेको १ ग्राम २ सय मिलिग्राम ब्राउन सुगरसहित ६ जनालाई आइतबार नियन्त्रणमा लिएको हो । ...
गोंगबुमा विभत्स हत्या भएको अवस्थामा फेला परेको शव पहिचान नभएपछि प्रहरीद्वारा फोटो सार्वजनिक access_timeसाउन २६, २०७७
काठमाडौं । गोंगबुमा विभत्स हत्या भएको अवस्थामा फेला परेको एक शवको पहिचान नभएपछि प्रहरीले फोटो सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार गोंगबु गणेशस्थान आसपासको छुट्टाछुट्टै स्थानमा सुटकेशमा शव र जेब्रा झोलामा पुरुषको टाउको फेला परेको थियो । अपराध महाशाखा र काठमाडौं प्...
गोङ्गबुमा भेटिएको शव कसको ?: प्रहरीलाई पहिचान खुलाउनै हम्मे access_timeसाउन २६, २०७७
काठमाडौं । गोङ्गबु चोकबाट गणेश मन्दिरतिर छिर्दा करिब एक सय मिटर पार गरेपछि अर्को सकडमार्ग आउँछ । टोखा नगरपाालिका–१० स्थित त्यो नवज्योती मार्ग हो । आईतरबार विहान सात बजेतिर त्यहि नवज्योती मार्गमा एउटा शव भेटियो । करिब ४०–४५ उमेर समूहका पुरुषको सो शव पहि...
सुटकेशमा तारको आकार बनाएर ‘सुन’ तस्करी, चारजना पक्राउ access_timeसाउन २५, २०७७
काठमाडौँ । सुटकेशभित्र प्रयोग हुने तारको आकार बनाएर सुन तस्करी हुन थालेको छ । आइतबार फ्लाई दुबईको रेस्क्यू फ्लाईटमा बाहिरबाट सेतो रंग लेपन गरेर सुन लिएर आएका चार जनालाई त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएको छ । शंकास्पद रुपमा सुटकेशमा फेला ...
बलात्कार मुद्दाका फरार पक्राउ access_timeसाउन २५, २०७७
काठमाडौं । बलात्कार मुद्दामा अदालतको फैसलापछि भागेका कैलाली गौरीगंगा नगरापलिका–३ का अर्जुन चौधरीलाई प्रहरीले पक्रेको छ । ०७२ भदौ १३ मा साँझपख ३ वर्षीया बालिकालाई उनले बलात्कार गरेका थिए । जिल्ला अदालत कैलालीले ०७३ जेठमा उनलाई बलात्कार मुद्दामा दोषी ठ...
१ किलो चरेश सहित पक्राउ access_timeसाउन २५, २०७७
काठमाडौं । चन्द्रागिरी नगरपालिका–५ दाउराडिपोबाट प्रहरीले मकवानपुर घर भएका देवेन्द्र थापा मगरलाई पक्रेको छ । दाउराडिपोमा ४२ वर्षीय देवेन्द्रको कोठा खानतलासी गर्दा १ किलो १६० ग्राम चरेश फेला परेको महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटले जनाएको छ । मकवानपुको थाहा न...
बोक्सीको आरोप लगाइ कुटपिट गर्ने दुई जना पक्राउ access_timeसाउन २५, २०७७
पाल्पा । बोक्सीको आरोप लगाई कुटपिट गरेको अभियोगमा २ जनालाई शनिबार राति प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा नुवाकोट बेलकोटगढी नगरपालिका-१ घर भई नवलपरासी देउचुली नगरपालिका-४ बस्ने ५६ वर्षीय बुद्धि पुडासैनी र सोही स्थान बस्ने ३७ वर्षीया यममाया कुमाल रहेका छन् ...
गोंगबु विभत्स हत्याकाण्ड : कुकुरले सुँघेर पत्ता लगाएको थियो अर्कै ठाउँमा भेटिएको टाउको र खुट्टा access_timeसाउन २५, २०७७
काठमाडौँ । आइतबार बिहान गोंगबु चोकबाट उत्तर–पश्चिमतर्फको ५०० मिटर दूरीमा एउटा सुटकेश भेटियो । पर्किङ गरेर राखिएको एक ट्याक्सी र मारुती भ्यानको बीचमा थियो सो, सुटकेश । उक्त सुटकेशलाई बाहिरबाट रातो प्लाष्टिकले बेरिएको थियो । धर्मस्थली घर भई टोखा नगरपा...
गोंगबुमा सुटकेशमा शव, जेब्रा झोलामा टाउको भेटियो (अपडेट) access_timeसाउन २५, २०७७
काठमाडौं – गोंगवु गणेशस्थानमा हत्या गरेको शव सुटकेशमा फालिएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । गणेशस्थान नजिकै कालो सुटकेशमा शव र दुई सय मिटरको दुरीमा टाउको फेला परेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका डिएसपी राजकुमार केसीले बताए । शव फेल...
२३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बराबरको सुनसहित एक जना पक्राउ access_timeसाउन २४, २०७७
मोरङ । मोरङ जिल्लाको बिराटनगर महानगरपालिका १६ दरैयाबाट शनिबार सशस्त्र प्रहरीको टोलीले करीब २३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बराबरको दुई सय ६७ ग्राम सुनसहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा सोही महानगरपालिका १७ बस्ने ...
बलात्कारको अभियोगमा वडाध्यक्ष जेल चलान access_timeसाउन २४, २०७७
काठमाडौँ । बलात्कारको अभियोग लागेका वडाध्यक्ष जेल चलान भएका छन् । कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष जगदिश शाही पूर्पक्षका लागि जेल चलान भएका हुन् । शुक्रबार जिल्ला अदालत कालीकोटले ५१ वर्षीय शाहीलाई कारागार चलान गर्ने आदेश दिएको जिल्ला अदालतक...
बलात्कार आरोपी पक्राउ access_timeसाउन २४, २०७७
बलात्कार आरोपित सप्तरीको राजविराज नगरपालिका–६ खर्साल टोलका २८ वर्षीय रोशन मण्डल पक्राउ परेका छन् । विराटनगरमा पक्राउ परेका मण्डललाई मोरङ प्रहरीले आज जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरी ल्याएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता रहेकाले थप अनुसन्ध...
भारतीय नागरिकसहित दुई जनालाई कैद access_timeसाउन २४, २०७७
मकवानपुर जिल्ला अदालत हेटौँडाले प्रतिबन्धित लागुऔषधका कारोवार तथा बिक्री वितरण गर्ने एकजना भारतीय नागरिकसहित दुई जनालाई कैद र दण्डसजाय फैसला सुनाएको छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारीको एकल इजलासले भारतको विहार राज्यको मोतिहारीका १८ वर्षीय जाकेर आ...
सुकेधाराबाट हात्तीको दाह्रासहित ३ जना पक्राउ access_timeसाउन २३, २०७७
काठमाडौं । हात्तीको दाह्रासहित प्रहरीले आज काठमाडौँको सुकेधाराबाट तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा पाँचथर घर भई काठमाडौं कपन बस्ने २८ वर्षीय रुद्र लिम्बु, सिन्धुपाल्चोक घर भई सोही ठाउँ बस्ने २५ वर्षीय हरि कार्की र गोरखा घर भई काठमाडौं सामाखुसी बस्ने २२ वर्षीय...
लागूऔषध मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ access_timeसाउन २३, २०७७
रौतहट । लागूऔषध मुद्दामा फरार एकजना प्रतिवादिलाई रौतहट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । रौतहट जिल्ला अदालत, गौरको लगत नं. १७५४ लागुऔषध मुद्दामा ६ महिना कैद र ५,०००।- जरिवाना भई फरार रहेका प्रतिवादी जिल्ला रौतहट चन्द्रपुर नपा वडा नं. १ बस्ने ४१ वर्षीय सन्तोष भन्ने खिलन...
‘ज्योतिष’ अर्जुन क्षत्री पुर्पक्षका लागि जेल चलान access_timeसाउन २३, २०७७
काठमाडौँ । आफूलाई ‘अख्तियारको सहसचिव’ भन्दै ठगी गर्दै हिँडेको आरोपमा पक्राउ परेका ‘ज्योतिष’ अर्जुन थापा क्षत्रीसहित चार जना पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन् । जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशले क्षत्रीसँगै राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, शम्भु कुमार रेग्म...
दार्चुलामा ८० वर्षीया वृद्धाको शव फेला, हत्या आशंकामा छोरा पक्राउ access_timeसाउन २२, २०७७
काठमाडौँ । दार्चुलाको दुहुँ गाउँपालिका–३ ब्रम्हदेवकी एक वृद्धा मृत फेला परेकी छन् । ८० वर्षीया नारुदेवी बम मृत अवस्थामा फेला परेकी दार्चुलाका प्रहरी निरीक्षक सुरेन्द्र जोशीले बताए । घरभन्दा २० मिटर टाढा बमको शव फेला परेको जोशीले जानकारी दिए । मृतकको ...
कपिलवस्तुमा १६ लाखसहित एक पक्राउ access_timeसाउन २१, २०७७
कपिलवस्तुमा स्रोत नखुलेको रु १६ लाखसहित एक जनालाई सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । कपिलवस्तु मायादेवी गाउँपालिका–१ पकडीका ३६ वर्षीय विनोद सोनारलाई रु १६ लाखसहित नियन्त्रणमा लिइएको सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक सन्तोष देवकोटाले बताए । भारतबाट नेपाल आउँदै गरेका...
जुलुसमाथि गोली प्रहार काण्ड : पक्राउ परेका गाउँपालिका अध्यक्ष धरौटीमा रिहा access_timeसाउन २१, २०७७
सर्लाही जिल्लाको धनकौल गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामआश्रय साह रु २५ हजार धरौटीमा रिहा भएका छन् । जुलुसमाथि गोली प्रहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका अध्यक्ष साहलाई जिल्ला अदालत सर्लाहीले रु २५ हजार धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । सो घटनामा पक्राउ परेका मुकेशकुमार साह यस...
दाङमा प्रेमिकै अगाडि प्रेमिकाको सामूहिक बलात्कार access_timeसाउन २०, २०७७
लमही । दाङको देउखुरीमा एक युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ । युवतीमाथि बलात्कार भएको केही समयमै प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गर्न सफल भएको छ । राप्ती गाउँपालिका– ३ नयाँबस्ती मसुरीयाकी १७ वर्षीया युवतीलाई राप्ती गाउँपालिका–४ का अन्दाजी २५ वर्षक...
बम विस्फोट गराउने अभियुक्त ९ वर्षपछि पक्राउ access_timeसाउन २०, २०७७
बाँके । सरकारी कार्यालयमा बम विस्फोट गराएर फरार अभियुक्तलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले ९ वर्षपछि पक्राउ गरेको छ । मालपोत, भूमि सुधार लगायतका कार्यालयमा बम विस्फोट गराएको अभियोगमा अदालतले जरिवाना र कैद सुनाएका डुडुवाका केशव राढलाई आज पक्राउ गर्न सफल...